Sida loo is waafajiyo 2 Kalandar Google | Martech Zone
Arbacada, Juun 10, 2020 Khamiista, Oktoobar 1, 2020 Douglas Karr
Aniga oo la wareegaya hay'addayda oo aan hadda u wada shaqaynayo sidii lammaane cusub Lamaanaha iibka, Waxaan hayaa arin meesha aan ka wado laba G Suite xisaabaadka oo hadda waxay leeyihiin 2 kaalandarro maareeya. Koontadaydii hore ee wakaaladda ayaa wali ku hawlan adeegsiga daabacaaddayda iyo hadalkayga - xisaabta cusubna waxaa loogu talagalay Highbridge.
Intii aan la wadaagi karay oo aan arki karandar kale kan kale, sidoo kale waxaan u baahanahay inaan si dhab ah u muujiyo waqtiyada kalandarka kale mid kasta oo ku mashquulsan. Waxaan raadiyay nooc kasta oo xal ah… sida kaliya ee aan ku sameyn karaana waxay ahayd inaan ku casuumo koontada kale munaasabad kasta, taas oo ah mid aad u fool xun una horseedi karta jahwareer macaamiisha.
Xitaa ka sii muhiimsan ayaa ah inaan haysto codsiyo isku-jadwal ah oo ku saabsan jadwal kasta. Tani waxay dhalisay in shirar badan la qorsheeyo isku dhac taas oo igu kaliftay inaan dib u dhigto. Waa yara jahwareer. Waxaan jeclaan lahaa taas G Suite waxay siisay awooda inaad ku biirto kalandarka kale oo aad uhesho sidii hore mashquul jadwalka aasaasiga ah.
Raadintaydu waxay keentay xal fiican, Nidaamyada Nidaamyada. Barxadda, waxaan awooday inaan ku daro laba isku-dhejin… koonto kasta oo kan kale ah.
Maxaad Iswaafajinaysaa Jadwalkaaga?
Waxaa jiri kara kiisas badan oo adeegsiga shaqadan ah. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad joojiso waqtiga jadwalkaaga shaqada oo ku saleysan jadwalkaaga gaarka ah / gaarka ah. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad nuqul ka sameysid dhammaan dhacdooyinka kalandarka kooxda illaa kanaga gaarka ah. Ama waxaad tahay qof madaxbanaan oo la shaqeeya dhowr macmiil oo kala duwan oo aad rabto inaad si uun isugu dubarido shaqadaada.
Koontadu waxay kuu ogolaaneysaa inaad iska diiwaangeliso kalandarka aasaasiga ah ka dibna aad u waafajiso ilaa 5 kalandar. Xitaa ka sii wanaagsan, waad u habeyn kartaa faahfaahinta jadwalka, oo ay ku jiraan:
Xasuusin - default waa nadiifiyey maadaama taasi ay ka dhalan karto in labada jadwalka ay kuu soo diraan xasuusin.
Color - gaar ahaan waxtar leh, waxaan heli karaa gelitaanka jadwal kasta oo lagu garto midab gaar ah.
Waa codsi weyn oo websaydh ah oo qaali ah qandaraas sanadle ah. Waan hubaa inay i badbaadin doonto in ka badan inta ay ku kacdo mustaqbalka fog.
Bilow 14-ka Maalin ee Tijaabada Bilaashka ah
Afeef: Anigu waxaan ku xidhan ahay Nidaamyada Nidaamyada
Tags: G Suitejadwalka googleguskasida loowax soo saarkajadwalkasyncIsku duwoiskuduwaha sanadlaha